यदि हाम्रो कुकुरको हिम्मत बढ्दै छ भने हामीले के गर्नुपर्ला? | कुकुरहरु को विश्व
यदि हाम्रो कुकुरको हिम्मत बढ्दै छ भने हामीले के गर्नुपर्ला?
कुकुरको पाचन प्रणाली यसको मुखबाट गुद्दा नपुगुञ्जेल शुरू हुन्छ, र यो हरेक खाना पचाउने कार्यमा हुन्छ, जसमा अधिकतम पोषक तत्वहरूको फाइदा लिइन्छ र फोहोर हटाइन्छ।
र यस प्रणालीले यसको कार्य पूरा गर्नका लागि यसलाई पनक्रियाज, कलेजो र पित्ताशयको पनीको मद्दत चाहिन्छ। यस प्रक्रियाको दौरानमा तपाईको हिम्मत बृद्धि गर्नु सामान्य हो, तर तपाई अन्य कुनै पनि लक्षणमा सतर्क हुनुपर्दछ.
1 यदि हाम्रो कुकुरको हिम्मत बज्यो भने हामीले के गर्नु पर्ने हुन्छ
2 किन मेरो कुकुरको हिम्मत बजिरहेको छ?
2.1 किन मेरो कुकुरको हिम्मत बजिरहेको छ र बान्ता गर्दैछ?
2.2 के गर्ने यदि तपाईंको साहस बज्दछ जब तपाईं धेरै खाईएको छ?
2.3 हाम्रो कुकुरको हिम्मत बजिरहेको छ र उसले खाएको छैन, के यो सामान्य छ?
2.4 मेरो कुकुरको पेट ठूलो छ, के हुन्छ?
2.5 मेरो कुकुरको हिम्मत बजिरहेको छ र उसलाई पखाला छ, के गलत भयो?
2.6 मेरो यार्कशायर हिम्मत किन बजिरहेको छ?
2.7 किन मेरो कुकुरको हिम्मत बजिरहेको छ र हल्लाउँदै छ?
2.8 मेरो कुकुरको पेट बजिरहेको छ र उसले खाँदैन, के हुन्छ?
3 के गर्ने यदि हाम्रो कुकुरको हिम्मत बजिरहेछ?
4 के हिम्मतको लागि बजेको लागि राम्रो छ?
5 के डाईजेस्ट गर्दा हिम्मतको लागि सामान्य छ?
6 पेट मुड्ने, एक खतरनाक रोग
यदि हाम्रो कुकुरको हिम्मत बज्यो भने हामीले के गर्नु पर्ने हुन्छ
जति सक्दो यस प्रणालीले यसको सामान्य गतिविधि गर्छ, ग्याँस उत्पादन भएको बखत चाल र आवाजहरू बनाउँदछ। प्राय: जसो यो काम शारीरिक क्रियाकलापबाट गरिन्छ र तयारी नगरी जान्छ, ताकि केवल केहि अवसरहरूमा हामी मालिकहरूले स्पष्ट रूपमा सुन्न सक्दछौं कि हाम्रो घरपालुवा जनावरहरू साहसी नै बजिरहेछन्।
यदि यी पेटको आवाज एकदम स्पष्ट भयो भने, पशु चिकित्सकमा जानु अघि तपाईंले केही उपायहरू लागू गर्नुपर्दछ:
खानाको ट्रेसको प्रमाण खोज्नुहोस् जुन कुकुरले तपाईलाई नबुझी खाएको हुन सक्छ।
सह लक्षणहरू ठेगाना।
यदि तिनीहरू जारी रहन्छन् वा बिग्रन्छन् भने, आपतकालीन परामर्शमा जानुहोस्.
यो केही रोकथामको साथ, पेटको हल्लाबाट जोगिन पनि राम्रो छ:
तपाईंको कुकुरको आहार तालिका कायम राख्नुहोस्, सँधै एकै समयमा र बराबर भागहरू ताकि तपाईं बिरामी नहुनुहोस् र भोकाउनुहुन्न।
कुकुर वा मानवको पहुँच भित्र स्थायी रूपमा खाना नछोड्नुहोस्, विशेष गरी यदि तपाईं लामो समयको लागि एक्लै बस्नुहुनेछ।
पहुँच भित्र खतरनाक वा विषाक्त तत्व नछोड्नुहोस्।
किन मेरो कुकुरको हिम्मत बजिरहेको छ?
त्यहाँ धेरै कारणहरू छन् जुन तपाईंको हिम्मत बज्न सक्छ, जस्तै:
किनभने तपाईंको कुकुर भोकाएको छ: जब कुकुर भोकाएको छ, मानिसमा जस्तै, तपाईंको आन्द्राले आवाज निकाल्छन्।
ग्याँस र हावा: पेट र आन्द्रा चालले ग्यास उत्पादन गर्दछ, धेरै छिटो खाँदा हावाको सेवन जस्तै र राम्रो चबाने बिना। हावा बदलेमा आंशिक रूपमा गडबडी उत्पन्न गर्दछ।
तिमीले नराम्रो कुरा खायौ: यदि तपाईं त्यस्ता चीजहरू खानु हुन्छ जुन राम्रो अवस्थामा राम्रो खालका छैन वा सरल पदार्थ वा उपभोगका लागि उपयुक्त नहुने, तपाईं हल्का गैस्ट्रोइन्टेस्टाइनल समस्याहरूको सामना गर्दै हुनुहुन्छ। चीजहरू खाने जुन तपाइँको सामान्य खानामा छैनन्, त्यसले तपाइँको पेटलाई दु: खी बनाउँछ र यस कारणले तपाइँको हिम्मतहरू बज्नेछ।
परजीवी वा आन्द्रा समस्याहरू: परजीवी वा आन्द्रा भित्र केहि विदेशी वस्तु को उपस्थिति, आँखा समस्या र शोर पैदा, त्यस्तै आन्द्राको रोगहरु जसले पेट दु: ख उत्पन्न गर्दछ।
केहि कम बारम्बार मामिलाहरूमा तिनीहरू सम्बन्धित हुन सक्छन् मेटाबोलिक र अन्त: स्रावी प्रणालीमा लिंक गरिएका विकृतिहरू। गम्भीर समस्याहरू हटाउन, यो पशु चिकित्सकलाई लिन आवश्यक छ।
किन मेरो कुकुरको हिम्मत बजिरहेको छ र बान्ता गर्दैछ?
पिल्ला इनोकुलेशन महत्त्वपूर्ण छ किनकि यसले क्यानिनहरूलाई थुप्रै संक्रमणबाट बचाउँछ। हामी यी आवाजहरु rumbling को नाम बाट थाहा छ, र अधिक विशिष्ट भन्न को लागी हुन्छ कि ती आन्द्रा मा ग्यास को चाल को कारण आवाज हो।
यो धेरै नै बारम्बार वा उच्च आवाजमा सुन्न सकिन्छ र अन्य लक्षणहरूसँगै यो समयमा। यो सिफारिश गरिन्छ कि हामी हाम्रो कुकुरलाई एक पशुचिकित्सकमा लगौं। यदि यस्तो हुन्छ कि हाम्रो कुकुरको हिम्मत बजिरहेको छ र यसका साथै उसले बान्ता गर्छ भने, यो धेरै कारणहरूको लागि हुन सक्छ।
मुख्यतया यो ग्यास्ट्रोइंटेस्टाइनल अपसेटको कारण हुन सक्छ खराब खाना वा फोहोर प्रत्यक्ष रूपमा खाएकोले हो। तर उही तरिकामा यो केहि संक्रमणको कारणले हुन सक्छ, वा एक विदेशी शरीर को उपस्थिति द्वारा।
यी प्रत्येक कारणहरू पाचन प्रणालीमा केही सूजनको अस्तित्वको लागि जिम्मेवार हुन्छन्, जुन बान्ता हुन सक्छ। कुकुरहरू सामान्यतया सजिलै बान्ता हुन्छ, त्यसैले हाम्रो प्यारी साथीले कहिलेकाँही यसलाई सचेत नगरीकन पनि गर्न सक्छन्।
यद्यपि, जब यी बान्ताहरू डरलाग्दो संग साथ छन्, रोक्नुहोस् वा यदि हामीले कुनै अन्य लक्षणहरू अवलोकन गर्‍यौं भने यो एकदम महत्त्वपूर्ण छ कि हामीले आफ्नो कुकुरलाई एक पशुचिकित्सकको लामा लैजानुपर्छ, जसले कुकुरलाई जाँच्न र यसको कारणहरू पत्ता लगाउनको लागि विशेषज्ञ डाक्टरलाई सल्लाह दिनको लागि जिम्मेवार हुन्छ।
के गर्ने यदि तपाईंको साहस बज्दछ जब तपाईं धेरै खाईएको छ?
त्यहाँ केसहरू हुन सक्छन्, र विशेष गरी कुकुरहरू जुन चाँडै खाने गर्दछन् खाना चिन्तापाचन प्रणालीले ध्वनि पैदा गर्न सक्दछ जब यो ओभरलोडको अधीनमा पर्दछ, किनकि कुकुरले धेरै खाना खाएको छ।
यस्तो अवस्थामा हामी फुलेको पेट देख्न सक्ने सम्भावना हुन्छ। सामान्य जस्तो, आवाज र सूजन एक घण्टाको लागि हुन्छ र यो केवल पाचन नभएसम्म प्रतीक्षा गर्न बाँकी छ।
यस समयमा यो हुन्छ, हामीले कुकुरलाई बढी खाना नदिनुपर्दछ, तर यदि हामीले अन्य लक्षणहरू अवलोकन गर्‍यौं वा हाम्रो कुकुरले यसको गतिविधि अनुरूप गरेन जुन यो सामान्य रूपमा हुन्छ र हिम्मतको आवाज अझै पनी जारी रहन्छ, हामीले यसलाई पशु चिकित्सकमा लिनु पर्छ।
हाम्रो कुकुरको हिम्मत बजिरहेको छ र उसले खाएको छैन, के यो सामान्य छ?
त्यहाँ केस छ जब हिम्मत आवाज किनभने तिनीहरू खाली छन्। यो विरलै हुन्छ, किनकि हाल मालिकहरूले ख्याल राख्छन् कि कुकुरहरूको लागि आवश्यक खाना छ।
हामी हाम्रो कुकुरको हिम्मतमा आवाजहरू सुन्न सक्दछौं, किनकि कुनै बिमारीको कारण उसले लामो समयदेखि खाना खान छोडेको छ। यदि यो अवस्था हो भने, जब खाना फेरि नियमित हुन्छ, डरलाग्दो चीज हराउनेछ.
मेरो कुकुरको पेट ठूलो छ, के हुन्छ?
जब यो आवाज वा गुर्गलि just त्यस्तै हुन्छ, अरू कुनै लक्षणहरू जस्तै पखाला वा बान्ता सम्भवतः ग्यासको कारणले हुने छैन पाचन पथको माध्यमबाट प्रसारण।
साथै यी ग्रुन्टहरू पशु भोक भैरहेको उत्पादन हुन सक्छन् र यदि तिनीहरू खाए पछि, यो पक्कै खाना पचाउन छ। धेरै अवस्थाहरूमा, lजब कुकुरहरू धेरै छिटो खान्छन्, तिनीहरूले धेरै हावा निल्छन् र यसले आन्द्रा आवाजहरू उत्पन्न गर्दछ।
अलि बढी नाजुक अवस्थामा, यो हुन सक्छ कि जनावरलाई परजीवी, विदेशी वस्तु वा पाचन रोग हो।
मेरो कुकुरको हिम्मत बजिरहेको छ र उसलाई पखाला छ, के गलत भयो?
यदि तपाईं पखाला पनि छ, सम्भवतः तपाईको कुकुरलाई ग्यास्ट्रोइन्टेस्टाइनल समस्या छ यसले पेट र आन्द्राको जलन पैदा गर्दछ। यदि मल निरन्तर चलिरहेको छ र रक्सी पिए पनि वा खाँदैन भने, तपाईंले उसलाई विशेषज्ञको परामर्शमा लैजानु पर्छ।
चिकित्सा मूल्यांकन र परीक्षाको आवेदन, तिनीहरूले समस्याको स्रोत र समाधान पनि निर्धारण गर्नेछन्।
मेरो यार्कशायर हिम्मत किन बजिरहेको छ?
कुकुरका कुनै पनि अन्य जात जस्तै, योर्कशायर केहि द्वारा प्रभावित हुन सक्छ पाचन अराजक यी शोरहरु को कारणजस्तै ग्यास, कमजोर पाचन र भोकसमेत। यदि यी आवाजहरू बान्ता जस्ता बढी नाजुक लक्षणको साथ छैनन् भने, यो अवलोकनको कुरा हो, सम्भावित कारणको खोजीमा र यदि यो जारी रह्यो भने, यसलाई आफ्नो डाक्टरमा लैजानुहोस्।
किन मेरो कुकुरको हिम्मत बजिरहेको छ र हल्लाउँदै छ?
जब पेटमा बेचैनी र असुविधा हुन्छ, कुकुरले यसलाई थरथर काँप्ने बनाउँदछयद्यपि तिनीहरू अधिक गम्भीर कुराले गर्दा हुन सक्छ आंतोको सूजन जस्तै, जसले ठूलो पीडा निम्त्याउँछ र सामान्यतया पखाला र भोकको क्षतिको साथ हुन्छ।
मेरो कुकुरको पेट बजिरहेको छ र उसले खाँदैन, के हुन्छ?
कुकुरलाई परजीवीहरू हुन सक्छ, किनकि यसले उनीहरूको पेटलाई कडा बनाउँछ र उनीहरूको भोक हराउँछ। पेट र आंतहरू ग्यासले भरिन्छ र यी शोरहरु उत्पादन हुन्छन्।
उसले सा a्गलो जस्ता विदेशी वस्तुलाई पनि निल्छ होला र उसको पेट ग्यासले भरिन्छ। अधिक नाजुक अवस्थामा, तपाईं एक आंत्र बाधा सामना गर्दै हुन सक्छ वा एउटा मोड. दुबैलाई तुरुन्त मेडिकल ध्यान चाहिन्छ.
के गर्ने यदि हाम्रो कुकुरको हिम्मत बजिरहेछ?
त्यहाँ धेरै कारणहरू छन् जुन हाम्रो कुकुरको हिम्मत बज्छ, यदि आवाज हल्लाउन छोड्दैन र यसको विपरित चर्को र अधिक जारी रहन्छ, सही गर्नु भनेको पशु चिकित्सकमा जानुहोस्।
यस भन्दा पहिले तपाईले रद्द गर्न सक्नुहुनेछ, जस्तो हामीले पहिले पनि भन्यौं, कि मैले केहि गलत खाएको छैन, भोक वा अपर्याप्त खाना बाहेक।
के हिम्मतको लागि बजेको लागि राम्रो छ?
यदि तपाईंले आफ्नो कुकुरलाई अझै खुवाउनु भएको छैन भने, सम्बन्धित खाना रासन प्रदान गर्नुहोस् र यी कम हुनेछ। उसलाई केही पानी दिनुहोस् र यदि ती रोकिदैनन् वा अन्य लक्षणहरू प्रस्तुत गर्दछन् जस्तै दुखाइ, पेटको सुजन, बान्ता वा पखाला, यो परामर्श गर्न को लागी लिनु पर्छ।
के डाईजेस्ट गर्दा हिम्मतको लागि सामान्य छ?
यो सहि छ, पेटको आवाजको मुख्य कारणहरू मध्ये एक कुकुर पाचन प्रक्रियाको माध्यमबाट जाँदा हुन्छ र जे भए पनि प्राय जसो केसहरूमा यो सुन्न त्यति स्पष्ट हुँदैन, यो धेरै नै स्वाभाविक कुरा हो.
पेट मुड्ने, एक खतरनाक रोग
कुकुरको पेटको धुवाँ एकदम नाजुक स्थिति हो, जसले उसको हिम्मत बज्दछ तर त्यसले उसलाई धेरै समस्याहरू र धेरै गम्भीर बनाउँछ। यसले निम्न लक्षणहरूको साथ आफैलाई प्रकट गर्दछ:
सूजिएको र कडा पेट।
क्षेत्र छुँदा जब दुखाई।
सफलता बिना बान्ता गर्ने प्रयास।
कुकुर शौच गर्न सक्दैन।
चिन्ता र बेचैनीको अवस्था।
त्यहाँ सुस्ती र उदासीनता हुन सक्छ।
रंगीन जिब्रो र गमहरू।
यदि तपाईं चिन्तित हुनुहुन्छ कि तपाईंको कुकुरको हिम्मत बजिरहेको छ भने, आफ्नो पशुचिकित्सकसँग परामर्श गर्न नहिचकिचाउनुहोस्।
लेखको पूर्ण मार्ग: कुकुर संसार » सामान्य कुकुरहरु » रोगहरू » यदि हाम्रो कुकुरको हिम्मत बढ्दै छ भने हामीले के गर्नुपर्ला?
अंग्रेजी Springer Spaniel, एक धेरै हंसमुख कुकुर
कुकुरले किन खुट्टा चाट्छन्?